Electric Air Conditioner yeMagetsi Minibus uye Coach fekitori uye vagadziri | SONGZ
Yakazara Magetsi Mhepo Inodzora Yemagetsi Bhazi, Uye Mudzidzisi
ESA Series, Yega Yega Kudzoka Nzvimbo, Ye 6-8m E-Bhazi
ESA nhepfenyuro nyowani nyowani simba bhazi mhepo kutonhodza rudzi rwemhando yedenga yakakwidzwa mhepo inotonhodza, ine imwechete mhepo inodzoka nzvimbo, uye nemhando dzakasiyana dzekunyorera emabhazi emagetsi kubva 6m kusvika 8m. Iyo ESA nhepfenyuro inotsigira neakasiyana tekinoroji tekinoroji, senge gore rinodzora tekinoroji, iyo yepamusoro-voltage kubatana anti-kusunungura tekinoroji, iyo yedenga unit yakasanganiswa bhatiri thermal manejimendi manejimendi system (BTMS) tekinoroji, mota yekupisa manejimendi manejimendi tekinoroji, iyo DC750 yakakwira voltage technology, iyo condensation yekudzora mvura tekinoroji, iyo mweya yekuchenesa tekinoroji mukati mebhazi uye simba-rinoponesa aruminiyamu chiwanikwa compressor.
Akangwara modular papuratifomu dhizaini (SONGZ SIEMA2 chikuva), iyo inoziva modular dhizaini uye musanganiswa we compressor, magetsi kutonga, condenser uye evaporator, yakasanganiswa yemafuta ekugadzirisa manejimendi uye nezvimwe. Iyo chigadzirwa dhizaini inoshanda uye yakavimbika, uye huwandu hwehuwandu hwepuratifomu chigadzirwa chipenga zvikamu inogona kusvika 72%.
Technical Rondedzero yeMagetsi Bhazi A / C ESA Series:
Muenzaniso: ESA-IB-BNDD ESA-IIB-BNDD
Kutonhora Kugona Standard 11 kW 13 kW
Yakakurudzirwa Kureba Kwebhazi （Inoshanda kune yekuChina mamiriro ekunze)
Kuyerera Kwemhepo Vhoriyamu (Zero Pressure) Condenser (Fan Zvakawanda) 5400 m3 / h (3) 5400 m3 / h (3)
Evaporator (Blower Yakawanda) 3200 m3 / h (4) 3200 m3 / h (4)
Roof Unit Divi 2700x1600x240 (mm) 2700x1600x240 (mm)
Kurema 150 makirogiramu 155 makirogiramu
Kushandiswa Kwemagetsi 4.8 kW 5.7 kW
ESA-IB-BNDD Ruzivo rwehunyanzvi ESA-IIB-BNDD Ruzivo rwehunyanzvi
1. Iyo yekuisa simba voltage yemhepo inogadzirisa inogona kuenderana neDC250-DC750V, uye iyo voltage yekudzora iDC24V (DC20-DC28.8). ESA yakateedzana haina kukodzera trolleybus.
Iyo yekuchaja nzira yekubuditsa mvura tembiricha ndeye 7℃-15℃, iyo inosunungura nzira yekubuditsa mvura tembiricha iri 11℃-20℃, kuchaja ≤10Kw, zvaikosha ≤1-3Kw, iyo compressor inoda kushandisa Zvakanyanya compressor.
Iyo ESA Series E-Bhazi AC Mabasa Anovandudza （Inesarudzo）
1.Ungwaru modular chikuva dhizaini (SONGZ SIEMA2 chikuva), inoziva modular musanganiswa we compressor unit, yemagetsi kudzora system, kupwanya system, evaporator, condenser, nezvimwe, uye dhizaini inoshanda uye yakavimbika.
2. Yakareruka dhizaini, aruminiyamu chiwanikwa pazasi gadzira dhizaini, yakasarudzika mhango dhizaini ye condenser, compressor uye control cavity, aluminium yakasanganiswa compressor, 30% yakareruka.
3. Denga rose dhizaini yemhepo-inodziya unit ine zvishoma kubatana, kushoma kugadzika, diki saizi, uye runako chitarisiko; marongero emhepo anoshandisa zvizere mhepo yekutyaira yemotokari yevanofamba kusimudzira kushanda nesimba kwesimba kwechigadzirwa.
4. Iyo yepamusoro gomo inotora yakasarudzika ruzha kudzikisira uye system yekubatanidza dhizaini yechipiri kuvhunduka kupinza. Pakati pemapuratifomu ese, chikuva ichi chine ruzha rwepashure, hurongwa hwakanakisa uye huwandu hwesimba rekushandisa simba.
5. EMC yechigadzirwa inosangana nezvinodiwa zveGG / T 18655 nhanho 3, uye iyo sisitimu inotora yakazvimirira yehungwaru kodzero yekudzivirira dhizaini, iri yakachengeteka uye yakavimbika, uye yapasa EU standard certification.
6. Iyo compressor inotora DC frequency kutendeuka (zvachose magineti inowirirana) tekinoroji, inosanganiswa neyakagadziriswa frequency kutendeuka kudzora, epamusoro-magumo zvigadzirwa zvakagadzirwa nemagetsi ekuwedzera mavharuvhu, chaiyo kudzora, simba kuchengetedza, kugadzikana uye zvakatipoteredza zvine hushamwari.
7.Iyo yemagetsi kutonga inotora zvese-mu-imwe dhizaini, iyo inonyatso kuderedza nzvimbo inogarwa nemagetsi dhizaini, uye wiring harness dhizaini yakanaka.
8. Yakabatanidzwa bhatiri Thermal manejimendi basa, kuburitsa 3-10kw bhatiri kutonhora kugona maererano nezvinodiwa nevatengi pasina kukanganisa kutonhora kwemota.
9. Kuchenesa mweya basa, kusanganisira ina mabasa: electrostatic guruva kuunganidzwa, ultraviolet mwenje, yakasimba ion jenareta, uye pikicha catalyst kusefa, kuti uwane sterilization, kunhuhwirira kubvisa uye inoshanda guruva kubvisa, uye zvinobudirira vharidzira hutachiona hwehutachiona.
10. "Cloud kudzora" basa, ziva kure kutonga uye kuongororwa, uye nekuvandudza chigadzirwa sevhisi uye kugona kugona kuburikidza nekushandisa kukuru kwedata.
11. PTC kudziyisa kwemagetsi, zvinoenderana nekugadzirisa kwakasiyana uye tembiricha iri mukati, tanga PTC munguva, kubatsira kupisa, uye kuona kudziya mune yakazara tembiricha renji.
Zvadaro: Magetsi Mhepo Inodzora yeMagetsi Bhazi uye Kochi, Imwe Yega Kudzoka Kwemhepo
Nyowani Energy Bhazi AC